नवलपरासीमा प्रहरीद्धारा ३ लाखको मालसमान बरामद - Nandanpost.com
परासी, १८ जेष्ठ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयल नवलपरासीले ३ लाख मुल्य बराबर मालसमान बरामद गरेको छ । जिल्लाको सिमावर्ति पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको वडा १ र २ को विभिन्न नाकाबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरीटोलीले ३ लाख ४ हजार ५३० रुपैया मुल्य बराबरको तस्करीका सामानहरु बरामद गरेको हो ।
स्थानिय तस्करहरुले लकडाउनको मौका छोपी भारतबाट नेपाल भित्राउदै गरेको काजुकिसमिस, बदाम, जिरासौंफ, कपडालत्ता र नेपालबाट भारत छिराउन खोजेको ४२५ केजी मटर र १०० केजी दाल सिमा प्रहरी चौकी महेसपुरले बरामद गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
बरामद उक्त सामाग्रीहरु आवश्यक कार्वाहीको लागि महेसपुर भन्सार कार्यालय पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै जेष्ठ १६ गते प्रहरीले जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका ३ धर्माैली नाकाबाट ३ बोरा सुद्धप्लस नामक गुटखा पनि बरामद गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीद्वारा तस्करीका सामान बरामद
आर्थिक 04/03/2019 0
अा.व ०७५/०७६ को बजेट तथा राजश्व नीति सम्बन्धित छलफल
भैरहवाँ, २० चैत । अार्थिक बर्ष २०७५÷०७६ काे बजेट तथा राजस्व नितीका लागि भैरहवाँमा छलफल भएकाे छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकाे प्रमुख अातिथ्यतामा भएकाे कार्यत्रफममा उद्रदाेगी तथा व्यवसायीकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । राजश्व परामर्श समितिको आयोजनामा भएकाे कार्यत्रफममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंं. ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले लिखित सुझाव दिएका थिए । नेपाल […]
Banner News 03/22/2019 0
काठमाडौं, ८ चैत । इराकको मोसुल शहरस्थित टिगरिस नदीमा एक डुंगा डुब्दा कम्तिमा ९२ जनाको मृत्यु भएको छ । इराकको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९२ जनाको शव प्राप्त भएको र अन्य व्यक्तिहरु वेपत्ता रहेको जानकारी दिएको सीएनएनले लेखेको छ । डुंगामा २ सय जनाभन्दा बढी सवार थिए । उनीहरु सबै घुम्नका लागि एक पर्यटकीय आइल्याण्डमा जाँदै थिए तर […]